ओली सरकारको अर्को निर्णयबिरुद्ध पनि सर्वोच्चमा दुई वटा रिट दायर, कहिले छ सुनुवाई ? — Imandarmedia.com
ओली सरकारको अर्को निर्णयबिरुद्ध पनि सर्वोच्चमा दुई वटा रिट दायर, कहिले छ सुनुवाई ?
काठमाडौँ । पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंगमा सुनको जलहरी राख्ने काम रोक्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट दर्ता भएका छन् । वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले बेग्लाबेग्लै रिट दर्ता गरेका हुन् ।